संसद नहुँदा पनि कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता ! - Everest Dainik - News from Nepal
संसद नहुँदा पनि कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता !
काठमाडाैं, मंसिर ९ । संसद् नै नहुँदा पनि यहाँ कार्यरत कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएका छन् । यसबाहेक खाना–खाजाका लागि थप दैनिक २५० रुपैयाँ सुविधा उनीहरूले पाउने गरेका छन् । राज्यकोषबाट सचिवालयका कर्मचारीको भत्तामा मात्रै मासिक ७० लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस कम तलबमै पनि मानिस सन्तुष्ट
याे पनि पढ्नुस वृद्धि भएको तलब आजदेखि लागू, कुन तहका कर्मचारीको तलब कति ? (तालिकासहित)
अर्थ मन्त्रालयबाट खर्च कटौती गर्न पत्र प्राप्त भएपछि व्यवस्थापन समितिले दैनिक खाना–खाजाको खर्च घटाएर २५० पुर्‍याएको हो । तलबको ८० प्रतिशत भत्ता भने कर्मचारीले अहिले पनि पाइरहेका छन् । खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएकाे छ ।
ट्याग्स: Parliament Karmachari, Salary